Real Madrid oo diyaar u ah inay fasaxdo Cristiano Ronaldo balse waa haddii… - Wargane News
Home Sports Real Madrid oo diyaar u ah inay fasaxdo Cristiano Ronaldo balse waa...
Real Madrid ayaa xagaaganu ogolaan doonta Cristiano Ronaldo inuu ka tago kooxda balse waa haddii uu ku biirayo PSG isla markaana uu Neymar u soo dhaqaaqayo Bernabeu.
Camaaliqada reer Spain ayaan ku faraxsanayn sidii uu u afduubtay dabaal degii Champions League kaddib markii uu dareenkii oo dhamaa u weecday hadalkii uu yiri ciyaartii Final ka kaddib.
Xiddiga reer Portugal ayaa shaki wayn galiyay mustaqbalkiisa isagoona sheegay inay wax fiican ahayd inuu u soo ciyaaro Madrid isla markaana uu goor dhow shaacin doono mustaqbalkiisa.
Yeelkeede, dabaal degii waynaa ee xalay ka dhacay Madrid ayuu Ronaldo misane la hadlay taageerayaasha isagoona u sheegay inuu arki doono sanadka soo socda waxaase Usbuucan looga fadhiyaa inuu dhinac u rido Mustaqbalkiisa.
PSG waxay aaminsan tahay inay Neymar sii heysan karto sanad kale. Wuxuu leeyahay heshiis qandaraaskiisa lagu bur burin karo 222 milyan oo bound kaa oo bilaaban doona dhammaadka kal ciyaareedka soo socda markaa oo ay Real Madrid weli safka hore u soo gali doonto si ay u qaadato Neymar, Ronaldo ayaana noqon doona midka ku haboon inuu ka badelo kooxda reer France iyadoo ay xitaa jirto inuu markaa 34-jirsan doono.
Ronaldo ayaa isagu doonayo in Mushaarka loo kordhiyo iyadoo markale laga dhigayo laacibka ugu mushaarka badan kubbada cagta adduunka wuxuuna sidoo kale doonayaa in laga caawiyo arrinta lacagaha Canshuuraha.